ventral tegmental inရိယာ၌ Orexin corticotropin ထုတ်လွှတ်သောအချက်ပြ receptor heteromers ကိုကင်းများအတွက်ပစ်မှတ်များအဖြစ် (2015) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
Orexin corticotropin ကင်းများအတွက်ပစ်မှတ် (2015) အဖြစ် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအချက်တစ်ချက်ကအဲဒီ receptor heteromers လွှတ်
J ကို neuroscience ။ 2015 ဧပြီ 29; 35 (17):6639-53. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4364-14.2015.
Navarro, G1, Quiroz ကို C2, Moreno-Delgado: D1, Sierakowiak တစ်ဦးက2, McDowell K သည်2, Moreno E ကို1, Rea W က2, Cai NS2, Aguinaga: D1, Howell LA က3, Hausch က F4, Cortésတစ်ဦးက1, Mallol J ကို1, Casadó V ကို1, Lluísကို C1, Canela EI1, Ferré S က5, မက်ကော်မစ် PJ6.
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အတွက် neuropeptides corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့် orexin-တစ်ဦး၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ ကျနော်တို့ CRF1 အဲဒီ receptor (CRF1R) ၏ oligomerization နှင့် orexin OX1 receptors အပေါ်မူတည်ကြောင်း CRF နှင့် orexin-တစ်ဦးကကြားက pharmacologically သိသိသာသာ interaction ကသက်သေအထောက်အထားပေး (OX1R) ။ CRF1R-OX1R heteromers သူတို့သိသိသာသာ dendritic dopamine လွှတ်ပေးရန် modulate ရသော transfected ဆဲလ်များနှင့်ကြွက် VTA အတွက်သရုပ်ပြအဖြစ် orexin-A နှင့် CRF အကြားတစ်ဦးကအနုတ် crosstalk များ၏ကြားခံဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကင်းပစ်မှတ်σ1အဲဒီ receptor (σ1R) ကိုလည်း CRF1R-OX1R heteromer နှင့်အတူဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါσ1R-CRF1R-OX1R ရှုပ်ထွေးဖို့ binding ကင်းသည့် orexin-A-CRF အနုတ်လက္ခဏာ crosstalk ၏ရေရှည်နှောင့်အယှက်ကိုအားပေးအားမြှောက်။
ဒီယန္တရားကိုတဆင့်ကင်းအရှင်စိတ်ဖိစီးမှုကင်းရှာ induces ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးယန္တရားများကို CRF နှင့် orexin-တစ်ဦးကနှစ်ဦးစလုံး၏ excitatory သက်ရောက်မှုမှ VTA ဆဲလ် sensitizes ။